5 Best barany Live Music In Eoropa | Save A Train
Home > Travel Europe > 5 Best barany Live Music In Eoropa
Fotoana famakiana: 4 minitra(Last Nohavaozina: 05/03/2021)
Barany velona ny mozika miseho na aiza na aiza any Eoropa, fanatitra fomba hamono fotoana ao amin'ny toerana mavitrika zava-pisotro sy ny hira mikoriana malalaka. Raha mitady hanana fahafinaretana kely ao an-tanàna ianao mandritra ny fiaran-dalamby nankany, dia efa nahazo soso-kevitra vitsivitsy. Ireto ny ambony 5 barany velona mozika manerana an'i Eoropa:
1. Live Music amin'ny The Record Shop, Paris, Frantsa
Amin'ny Tantaran'ny Shop dia iray amin'ireo tsara indrindra barany velona mozika any Frantsa. Izany fotsiny ivelan'ny toby Bastille Metro. Tsy vitan'ny no mora ny hahazoana ny, fa indrindra ihany koa Cozy. Ny fisotroana dia eo aloha, ary manana sehatra fampisehoana tena izy ao ambadiky ny toerana mozika, with the audience space hidden behind it.
fahazoan-dalana mankany an-toerana mahazo ny famandrihan-toerana raha mitsidika an'ity bara mozika mivantana ity dia anao lisitra fitsangatsanganana. Satria ny fidirana maimaim-poana, dia mety ho sarotra ny hahazo seza ao amin'ny bar. Rehefa any, ianao dia ho afaka hankafy mozika rehetra, ny karazan-dahatsoratra, tanteraka velona.
2. Live Music amin'ny Rano, Luxembourg City, Luxembourg
Ny fisotroana miaraka amin'ny velona mahaliana mozika nataony vao haingana Luxembourg eo amin'ny sarintany ny Eoropeana Nightlife. rano Cafe dia miorina ao amin'ny faritra Grund Toerana mahafinaritra ny Luxembourg. Raha manana molotov na mpisotro sy asa tanana labiera tia ao amin'ny Travel antoko, izany no toerana mba handeha.
Na dia nankafy ianao tena fohy nijanonany in Luxembourg, Azo inoana fa ianao ho afaka ny hisambotra velona mampiseho ny mozika ao amin'ny Rano ny Talata sy ny Alakamisy. Raha toa ianao mpiady misy weeknight, izao no toerana ho anao.
Bonn any Amsterdam Lamasinina
Hamburg ho any Amsterdam Lamasinina
Munich an'i Amsterdam Lamasinina
3. ny Manda, Roma, Italia
Azonao sary an-tsaina hahita vaovao velona an-toerana fisotroana amin'ny mozika mba hitsidika isan-alina mandritra ny vakansy Eoropeana? Ampidiro ny Manda, iray amin'ireo malaza indrindra Roma velona mozika bara, amin'ny Gigs isaky ny alina.
Ny fisotroana ny toerana manan-tantara mahitsy eo fon'ny San Lorenzo faritra mpianatra ianao dia midika hoe ho afaka hihaona maro mahaliana mponina. ankapobeny, ho marina romanina traikefa, Le Mura dia tsy maintsy-fitsidihana - amin'ny alina na amin'ny herinandro.
4. The Parrot, London, Grande-Bretagne
toa, Idris Elba mahafantatra izay manambatra ny sakafo mba ho velona mahafinaritra fisotroana amin'ny mozika. Ny mihaja bara, The Parrot, Faritany Aldwych sy manatitra traikefa manokana.
Raha ny trano tarika mametraka ny sehatra amin'ny fampisehoana mahafinaritra, tsy te-tara Mr. Ny DJ tsy tapaka Elba milentika. Marina izany - ny Hollywood matetika mpilalao maka anjara amin'ny fahafinaretana amin'ny alalan'ny manao DJ milentika, ny fisotroana mpitsidika 'fifaliana. Miloko mamirapiratra-Molotov miramirana ny toe-po bebe kokoa eto amin'ity tany mafana-nanana lohahevitra vorona velona mozika bara.
Ho an'ny fahafinaretana ny mpizaha tany ary ny mponina tia mozika velona izany fisotroana, The Waterhole Efa manodidina mahery 25 taona. isaky ny hitsidika Amsterdam, dia hanan-javatra atolotra anao, na dia mandritra ny andro. Tamin'ny mahitsy amin'ny andro, tsy misy zavatra tsara noho sasatra eo amin'ny fisotroana ny lavarangana malalaka.
Raha ny fahazoana aina dia avo eo amin'ny lisitry ny laharam-pahamehana, Ny Waterhole maka ny satro-boninahitra tsara indrindra ho an'ny toeram amin'ny velona mozika any Amsterdam. Noho ny foibe toerana, dia matetika Feno. Antony iray hafa ny vahoaka tia dia sambatra ora, izay maharitra mandra- 9 PM!
Ny fitsidihana akory va ny Best Live Music Bara no tonga lafatra fomba hanombohana na hamarana ny Europe Train Trip, toy izany Boky ny Tickets Ankehitriny!
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “5 Best barany Live Music any Eoropa” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome voninahitra fotsiny amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-bars-live-music-europe%2F%3Flang%3Dmg- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Train Travel Austria, Train Travel Belzika, Train Travel Repoblika Tseky, Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby Alemana, Train Travel Holland, Fiaran-dalamby Switzerland, Train Travel The Netherlands, Torohevitra toro-lalana amin'ny lamasinina, Train Travel UK, Travel Europe